ဖခင်က သမီးကြီးကို သားမယားကျင့်နေစဉ် သမီးငယ်က ချောင်းကြည့်သောအခါ…. - POPPIN NEW
ဖခင်က သမီးကြီးကို သားမယားကျင့်နေစဉ် သမီးငယ်က ချောင်းကြည့်သောအခါ….
March 15, 2019 ပြည်တွင်းသတင်း
သတင်း + ဓာတ်ပုံ = ကိုတိုးကြီး မုံရွာ၊ မတ် ၁၅
ကိုလှမြင့်ဦး အသက် (၃၀)နှစ်ဆိုသူက သူရဲ့သမီး အသက် (၉) နှစ်အရွယ်ဖြစ်သူ မ… ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လခွဲခန့် က နေအိမ် နောက်ခန်းရှိ အိပ်စင်ပေါ်မှာ တစ်ကြိမ် ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လခန့်က နေအိမ်ရှေ့ခန်းရှိ တန်းလျားပေါ်မှာ တစ်ကြိမ် ၊ နောက်ပြီး တောထဲမှာ ထင်ခွေသွားရင်း တောထဲ တစ်ကြိမ် သားမယားအဖြစ် အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့တယ် လို့ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီလို ဖခင်ဖြစ်သူက အသက် (၉)နှစ်အရွယ် သမီးအကြီးကို သားမယားအဖြစ် ပြု့ကျင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ အသက် (၆)နှစ်အရွယ် သမီးအငယ်ဖြစ်သူက ချောင်းမြောင်းကြည့်ပြီး သူမရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူများ ကို တဆင့်ပြန် လည်ပြောပြရာက အဲ့ဒီ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့် သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခြင်းခံရတဲ့ သူမရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူ မအေးဇင်ခိုင်က ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့ည ၉ နာရီအချိန်မှာ မုံရွာနယ်မြေရဲစခန်းကို သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုင်တန်းချက်ကို ရဲစခန်းက ပြစ်မှုကြီးဖြစ်စဉ်အမှတ် ၃ / ၂၀၁၉ ၊ (ပ) ၆၆ / ၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုရေးဖွင့်ခဲ့ပါတယ် …..
နညေ့မပွတျအရကျမူးနသေညျ့ ဖခငျဖွဈသူက အသကျ(၉)နှဈအရှယျ သမီးအရငျးဖွဈသူအား သားမယားအဖွဈ အဓမ်မပွု့ကငျြ့
သတငျး + ဓာတျပုံ = ကိုတိုးကွီး မုံရှာ၊ မတျ ၁၅
အဲ့ဒီလို ဖခငျဖွဈသူက အသကျ (၉)နှဈအရှယျ သမီးအကွီးကို သားမယားအဖွဈ ပွု့ကငျြ့နတေဲ့ အခြိနျမှာ အသကျ (၆)နှဈအရှယျ သမီးအငယျဖွဈသူက ခြောငျးမွောငျးကွညျ့ပွီး သူမရဲ့ အဒျေါဖွဈသူမြား ကို တဆငျ့ပွနျ လညျပွောပွရာက အဲ့ဒီ ရာဇဝတျပွဈမှု ပျေါပေါကျခဲ့ တာဖွဈပါတယျ..
အဲ့ဒါကွောငျ့ သားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့ခွငျးခံရတဲ့ သူမရဲ့ အဒျေါဖွဈသူ မအေးဇငျခိုငျက ယခုလ ၁၀ ရကျနညေ့ ၉ နာရီအခြိနျမှာ မုံရှာနယျမွရေဲစခနျးကို သှားရောကျတျိုငျတနျးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီတျိုငျတနျးခကျြကို ရဲစခနျးက ပွဈမှုကွီးဖွဈစဉျအမှတျ ၃ / ၂၀၁၉ ၊ (ပ) ၆၆ / ၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၇၆ အရ အမှုရေးဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ …။
အသက်၁၅နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ မန္တလေးကနယ်ထိန်း ရဲအထန်ကောင်ကိုဖမ်းမိပြီ။
Pop Pin New January 31, 2019
ပဲခူးတိုးဂိတ်မှာ ကားတွေကို တားပြီး လုပ်စားနေ(ရုပ်သံဖိုင်)
Pop Pin New February 28, 2019